Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » UKhetho olutsha lwe-Visa ye-Expat inokonyusa uKhenketho lwe-GCC
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
Ukubonelela ngabasebenzi abaphuma kumazwe angaphandle, abafanelekileyo, ngee-visa zokuhlala ukuze bahlale ngaphaya kobomi babo bokusebenza kunye nokwaziswa kothotho lwezinye iinketho ezintsha ze-visa kuya kuba ngundoqo kukhenketho kunye nokunika amandla okutsala umdla, imisebenzi kunye neendawo zokuzonwabisa. Oku kuya kuba sesinye sezihloko ezibhekiswe kwi-Arabian Travel Market (ATM), i-2022, eyenzeka ngoMeyi 8-11.
I-ARIVAL Dubai @ ATM ukugxila kukhetho olutsha lwe-visa ye-expat, enokubonelela ngeziganeko zengingqi, umtsalane, imisebenzi kunye neendawo zokuzonwabisa.
Ukundwendwela usapho kunye nezihlobo zabadla umhlala-phantsi kuya kunceda ukugudisa iincopho kunye nemikhombe yamaxesha okuhamba anemfuno ephezulu nephantsi.
Icandelo lezophapho kwi-Gulf ukuba livune inzuzo kwimarike yehlabathi exabisa i-254 yeebhiliyoni zeedola.
I-ARIVAL Dubai @ i-ATM iqhubela phambili ekudalweni kwamava kwindawo ekuyiwa kuyo ngokubonelela ngolwazi kunye noluntu lwabadali kunye nabathengisi bokhenketho, imisebenzi kunye nezinto ezinomtsalane. Iphonononga iindlela zangoku nezexesha elizayo kwaye igxile ekukhuleni kweshishini ngokuthengisa, itekhnoloji, ukuhanjiswa, ubunkokeli bokucinga, kunye nonxibelelwano lwenqanaba lesigqeba.
Kuqikelelwa ukuba ngoku kukho ngaphezulu kwe-35 yezigidi zabasebenzi abavela kumazwe angaphandle kumazwe e-GCC kwaye kunokubakho ubungakanani obukhulu boluntu lwekhola emhlophe, abanokufuna ukuthatha umhlala phantsi kwi-GCC, nokuba bekulithuba elifutshane. .
“Ngeendlela kunye nexesha ezandleni zabo, kuya kuba yinto eqhelekileyo, kungekuphela nje kwaba badla umhlala-phantsi, kodwa nokwamkela usapho kunye nabahlobo. Iinkampani zeenqwelomoya, iihotele, indawo ekuya kuzo kunye nezinye iindawo zokuzonwabisa, zonke ziyaxhamla kolu luhlu lwengeniso olongezelelekileyo ebenokuthi ngokwesiqhelo luphulukene, ukuba abo bathathe umhlala-phantsi babuyele kumazwe abo,” utshilo. UDanielle Curtis, UMlawuli weMiboniso, ME, Intengiso yeArabia.
Ukongeza, ayisiyonto yanto yanto yokuba iimakethi ezimbini eziphambili zeDubai ngo-2019, iIndiya eneendwendwe ezizizigidi ezibini kunye ne-UK, nabatyeleli abazizigidi ezisisi-1.2 banoluntu e-UAE, ezizigidi ezi-2.6 kunye ne-120,000 ngokulandelelanayo.
Ukubona obu buchule, uKhenketho lwaseDubai ngokubambisana noMlawuli Jikelele wokuHlala kunye neMicimbi yezaNgaphandle (GDRFA-Dubai), sele isungule inyathelo elibizwa ngokuba yi "Retire in Dubai," eyokuqala yohlobo lwayo kulo mmandla, isakhelo esisebenzayo esinobuncinci obuthile. iimfuno zemali, apho abahlali baseDubai abasondela kwiminyaka yokuthatha umhlalaphantsi, banokufaka isicelo se-visa ehlaziyiweyo, yeminyaka emihlanu yomhlalaphantsi.
“Ukuba eli nyathelo liyimpumelelo, kusenokwenzeka ukuba amanye amazwe e-GCC alandele ngaxa lithile. Abaphambukeli abasele besidla umhlala-phantsi ngokungathandabuzekiyo baya kuba negalelo elikhulu kwicandelo lezokhenketho, bafumane usapho kunye nabahlobo kwaye baqhubeke bephila ubomi obusemgangathweni abasele bebuqhelile,” wongeze watsho uCurtis.
Ixabisa i-254 yeebhiliyoni zeedola kwihlabathi liphela ngo-2019, ukhenketho, imisebenzi, kunye necandelo elinomtsalane lokuhamba nokhenketho ayisiyonxalenye yesithathu ngobukhulu yokuhamba; kungoko abantu abaninzi behamba kwasekuqaleni. Ukubonelela ngeyona nto ikhuthazayo iya kuba yiminyhadala kunye nezinto ezinomtsalane, ezinje nge-Expo 2020, iNdebe yeHlabathi yeFIFA ka-2022 eQatar, eAin Dubai, kunye nezinto ezikhangayo ezizayo zokhenketho eSaudi Arabia kunye nobuhle bendalo baseOman.
Ngoku kunyaka wayo wama-29 kunye nokusebenza ngokubambisana neDubai World Trade Centre (DWTC) kunye neSebe lezoKhenketho kunye neNtengiso yezoRhwebo eDubai (DTCM), umsitho, umboniso obalaseleyo ngo-2022 uya kubandakanya, phakathi kwezinye, iindibano zokusingwa ezigxile kwiimarike zomthombo ongundoqo. Saudi, Russia, China kunye neIndiya.
UkuHamba Phambili, umsitho wehlabathi okhokelayo kubuchwepheshe bohambo obeka iliso kubuchwepheshe bamva nje, besizukulwana esilandelayo sohambo nokubuka iindwendwe, iiforam zabathengi be-ATM kunye neziganeko zothungelwano olukhawulezayo.
I-ATM 2022 nayo iza kubamba iingqungquthela ezizinikeleyo zenkomfa kwiGlobal Stage, ezibandakanya ezomoya, iihotele, ukhenketho lwezemidlalo, ukhenketho lokuthengisa kunye nesemina ekhethekileyo yokwamkela iindwendwe. IGlobal Business Travel Association (GBTA), eyona nkulumbuso yehlabathi yezohambo lwezoshishino kunye neentlanganiso zombutho wabarhwebi, iya kuphinda ithathe inxaxheba kwi-ATM. I-GBTA iya kuhambisa umxholo wamva nje wokuhamba kweshishini, uphando kunye nemfundo ukuqhuba ukubuyiswa kunye nokuxhasa ukukhula kohambo lweshishini. Kwaye ngokubambisana ne "Arival the-in-instination voice," i-ATM iya kuqhuba inkomfa yosuku lwesiqingatha ngoMeyi 8 okanye uSuku loku-1 lwe-ATM.
I-ATM iya kudlala indima ebalulekileyo kwiVeki yokuHamba yaseArabia, umthendeleko weziganeko ezinikezelwe kwiingcali zokuhamba ezivela kulo lonke ihlabathi, ukusebenzisana kunye nokubumba ukubuyiswa kweshishini lokuhamba kuMbindi Mpuma, ngokusebenzisa imiboniso, iinkomfa, iinkcazo zesidlo sakusasa, amabhaso, ukuqaliswa kwemveliso kunye nokuqaliswa kwemveliso. Iziganeko zothungelwano.
Ukulandela u2021, IATM eyiyo iya kuphinda yenzeke phakathi kweVeki yokuHamba yase-Arabia ukuncedisana nomboniso we-ATM ophilayo. Ngenkqubo ebanzi, yenqanaba eliphezulu lewebhu kunye neshedyuli epheleleyo yeentlanganiso zevidiyo ezifumanekayo kubabonisi abanabathengi abaphambili emhlabeni jikelele.
Malunga neMarike yoKhenketho yeArabia (ATM)
I-Arabian Travel Market (ATM), ngoku ekunyaka wayo wama-29, yeyona nto iphambili, yohambo lwamazwe ngamazwe kunye nesiganeko sokhenketho kuMbindi Mpuma weengcali zokhenketho ezingenayo neziphumayo. I-ATM ka-2021 ibonise iinkampani ezingaphezu kwe-1,300 eziphuma kumazwe angama-62 kwiiholo ezilithoba eDubai World Trade Centre, neendwendwe ezivela kumazwe angaphezu kwe-140 kwezi ntsuku zine. IMarike yokuHamba yaseArabia yinxalenye yeVeki yokuHamba yaseArabia. #ImibonoFikaApha
eTurboNews uliqabane leendaba kwiATM.